भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नै ठेकेदार, अधिकांश सडक अधुरा
मंगलवार, आषाढ २३, २०७७
Tue, Jul 7, 2020 at 11:07pm
काठमाडौंमा कसरी बढे कोरोना सङ्क्रमित ? #आहा खबर# 'सरकारको प्राथमिकता संकटमा जनता जोगाउने भन्दा पनि कुर्सी जोगाउने भयो' #आहा खबर# ‘बन्दाबन्दीमा निजी विद्यालयले शुल्क असुल्नु न्यायपूर्ण छैन’ #आहा खबर# कारबाहीमा परेपछि सरिता गिरीले भनिन्ः 'ममाथि षड्यन्त्र भयो, कानुनी उपचार खोज्छु' #आहा खबर# प्रहरीको नयाँ आइजिपीमा शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त #आहा खबर# स्वास्थ्य मन्त्रालय र सत्याग्रही युवाबीच सहमति, अब पिसिआर विधिबाट मात्र कोरोना जाँच #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकाका यी स्थानमा भेटिए कोरोना सङ्क्रमित #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओलीले दिए फ्रान्स र आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीलाई बधाई #आहा खबर# पछिल्लो २४ घण्टामा ६८८ जना ‘डिस्चार्ज’, चार जिल्ला कोरोना ‘फ्री’ #आहा खबर# दुर्गेश थापाकाे नयाँ गीत ‘बीच्च बीच्चमा २’ विवादमा, चाेरीकाे आरोप #आहा खबर# अमेरिकामा पनि टिकटकसहित चिनियाँ एपहरु माथि प्रतिबन्धको तयारी #आहा खबर# झलनाथ खनालसँग चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीकाे भेटवार्ता #आहा खबर# भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रशासकीय अधिकृत कारागार चलान #आहा खबर# व्यास नगरपालिकाले दियाे २ महिनाको भाडा छुट #आहा खबर# बाढीपहिरोका कारण डडेल्धुराका आधा दर्जन ग्रामीण सडक अवरुद्ध #आहा खबर#
बिहिवार, ३० श्रावन २०७६,	आहाखबर
काठमाडौँ, ३० साउन ।
सम्झौता अनुसार काम भएको भए पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने सुवाघाट–टुँडीखेल जोड्ने सडक गत आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भएर गाडी सञ्चालन भइसक्थे। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २५ किलोमिटर यो सडक निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी/एमके/लोहनी जेभी काठमाडौंले लिएको थियो। गत आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सडकको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत मात्रै छ।
२०७४ असार २८ गते सो निर्माण कम्पनीले १२ करोड ४५ लाख ४० हजार ९४२ रुपैयाँमा २०७६ असार मसान्तभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्पन्न गर्ने समयसम्म २१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी (रुकुम पश्चिम) ले एक वर्ष म्याद थपेको छ।
प्रदेश मन्त्रालय मातहत आउनुअघि यो सडक डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतको कार्यक्षेत्रभित्र थियो। उतिबेलै समयमै काम सम्पन्न गर्न डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई तीनपटक पत्र काट्यो। निर्माण कम्पनीले कुनै पनि पत्रको जवाफ दिएन्। ‘उतिबेला निर्माण कम्पनीबाट एउटै पत्रको पनि जवाफ आएन्,’ डिभिजन सडक कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले प्रदेश मातहत गएपछि झन् डामाडोल भएको सुनेका छौं। ’
अहिले धेरैजसो सडक आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत छन्। सुवाघाट–टुँडीखेल सडकको जिम्मा पाएको लुम्बिनी/एमके/लोहनी जेभीका सञ्चालक प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री हुन्। सुर्खेतमा उक्त सडकसहित मन्त्री खत्री सञ्चालक रहेको निर्माण कम्पनीले चारवटा सडकको ठेक्का पाएको छ। सो कम्पनीले ठेक्का लिएका कुनै पनि सडकको काम सन्तोषजनक छैन्।
त्यस्तै बोटेचौर–धारापानी सडक निर्माण सम्झौता भएको २४ महिना भयो। ३६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ११ प्रतिशत मात्रै छ। सुर्खेत र सल्यानको सिमाना हुँदै साबिकको धारापानी गाविसको केन्द्र जोड्ने ५२ किलोमिटर यो सडक कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हो टुंगो छैन्। १६ करोड ८२ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको महालक्ष्मी/किरातेश्वर/प्रदीप जेभीले ठेक्का रकमको ८.२ प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेको छ। मन्त्री खत्री नै संलग्न रहेको सो निर्माण कम्पनीले काममा चासो नदिँदा भौतिक प्रगति न्यून भएको स्थानीय बताउँछन्। साबिकको धारापानीमा अहिलेसम्म सडक पुगेको छैन्। ‘ठेकेदार विभागीय मन्त्री हुँदा समयमै काम भएन्,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘त्यसैले नगरपालिका आफैंले धारापानीसम्म सडक पु¥याउन काम गरिरहेको छ। ’ धारापानी अहिले गुर्भाकोट नगरपालिकामा पर्छ।
मन्त्री खत्रीले जेभीमार्फत ठेक्का लिएर व्यावसायिक साझेदारलाई अख्तियारी दिएका सडकको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिन्छ। मन्त्री खत्री नै संलग्न रहेको महालक्ष्मी/किरातेश्वर/प्रदीप जेभीले नै ठेक्का लिएका पिपिरा–देउतीबज्यै–ढोलढुंगा–थारुगाउँ–अमृतडाँडा सडक र रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–घुस्रा–इन्जिनियरिङ क्याम्पस–सानो सुर्खेत सडकको भौतिक प्रगति राम्रो छ। यी दुवैै सडक उनका व्यवसायिक साझेदार सूर्य रावतले हेरिरहेका समाचार नागरिकमा छ ।
१७ करोड ३३ लाख २१ हजार रपैयाँमा ठेक्का लागेको पिपिरा–देउतीबज्यै–ढोलढुंगा–थारुगाउँ–अमृतडाँडा सडकको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत छ। २०७४ असार २८ गते ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकको अवधि २०७६ असार २७ सम्म छ। यस्तै २१ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–घुस्रा–इन्जिनियरिङ क्याम्पस–सानो सुर्खेत सडकको पनि भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत छ। ‘उनी (खत्री) आफैंले जिम्मा लिएका सडकको वित्तीय प्रगति अत्यन्तै न्यून छ,’ सडक डिभिजन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उनले ठेकका लिएर अरुलाई हेर्ने जिम्मा लगाएका सडकको काम भने सन्तोषजनक छ। ’
मेलम्चीकाे सुरुङ परीक्षण सफल, एक किलोमिटरमा पानी हालियो
३२ वटै वडा कार्यालय भवन निर्माणमा जुट्यो काठमाडौं महानगरपालिका
कोरोना भाइरसले प्रभावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काममा फर्किएनन् चिनियाँ प्राविधिक
कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा पनि नयाँ लेन नियम लागू हुने
सडक बनाउन आफैँ घर भत्काउँदै स्थानीयवासी
भरतपुर विमानस्थल विस्तारबारे सर्वपक्षीय छलफल
काष्ठमण्डप पुनः निर्माणका लागि कामपाको पाँच करोड
निर्माण उपकरण जलाउने समूह नियन्त्रण गरिने : गृहमन्त्री थापा
सकियो दरबार हाईस्कुल पुनः निर्माणको काम
नेपालकै पहिलो ‘नेटवर्क आर्क पुल’को निर्माण सम्पन्न
काठमाडौंमा कसरी बढे कोरोना सङ्क्रमित ?
'सरकारको प्राथमिकता संकटमा जनता जोगाउने भन्दा पनि कुर्सी जोगाउने भयो'
कारबाहीमा परेपछि सरिता गिरीले भनिन्ः 'ममाथि षड्यन्त्र भयो, कानुनी उपचार खोज्छु'
प्रहरीको नयाँ आइजिपीमा शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त